आउटडोर विज्ञापन रणनीतिमा मोबाइल एकीकृत गर्दै Martech Zone
आउटडोर विज्ञापन रणनीतिमा मोबाइललाई एकीकृत गर्दै
बुधबार, जुलाई 15, 2009 आइतबार, जुन 21, 2015 एडम सानो
मोबाइल मार्केटिङ दैनिक रूपमा उदाउँदो र सामान्य हुँदै गइरहेको छ। गत हप्ता म मर्टल बीचमा परिवार भ्रमण गर्दै थिएँ र यो बिलबोर्ड देखें। उनीहरूको समग्र मार्केटि strategy रणनीतिमा मोबाइल एकीकृत गर्ने प्रमुख आकर्षण देखेर यो ठूलो थियो।
डगको उस्तै मोबाइल एकीकरण छ उसकी साइटमा, तपाईं सक्नुहुन्छ Mar१71813१XNUMX मा MartechLOG पाठ गर्नुहोस् र जब उनी पोष्ट हुन्छन् एक सतर्कता पाउनुहोस्! मैले काटें छोटा कोडहरू यस तस्विर बाहिर ताकि कोही कोही पनि उनीहरूलाई पाठ पठाउन प्रलोभनमा पर्दैन (यसको विज्ञापनदातालाई पैसा खर्च हुन्छ)।
यो वास्तवमा केवल बिलबोर्ड थिएन जुन मैले मोबाइल मार्केटि integ एकीकरणसँग देखेको थियो। मैले एक आतिशबाजी पसल तपाईलाई सोध्छु पाठ "BANG" सर्टकटमा विशेष प्रस्तावको लागि पनि!
बिलबोर्डहरूको साथ पाठ सन्देश संयोजन गरेर, रिप्लेको एक्वेरियम:
अब होर्डिंगको प्रभावकारिता ट्र्याक गर्न सक्षम छ।
ट्र्याक गर्न सक्दछ कसरी नयाँ आकर्षण सिर्जना गरीरहेको छ।
उपभोक्तासँग अन्तर्क्रियाको नयाँ तह प्रस्तुत गर्‍यो।
यसमा समावेश गर्न सकिने अर्को सुन्दर सुविधा भनेको विज्ञापनदातालाई सचेत गराउने र उपभोक्ताको मोबाइल नम्बरको साथ तिनीहरूलाई आपूर्ति गर्ने क्षमता हो। रिप्लेको एक्वेरियम प्रस्तावको लागि टेक्स्टिंगको कल्पना गर्नुहोस् र केहि मिनेट पछि एक प्रतिनिधिले तपाईंलाई कल गर्दछ र सोध्छन् यदि तपाईंसँग केही प्रश्नहरू छन् भने!
यो कसरी मोबाइल एकीकरणले अवस्थित बाहिरी विज्ञापन रणनीतिहरू बढाउन सक्दछ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो। तपाईं मोबाइलको साथ के गर्दै हुनुहुन्छ?
टैग: बिलबोर्ड विज्ञापनमोबाइल मार्केटिङआउटडोर विज्ञापनएसएमएसपाठ सन्देश
कसरी ग्राहक पुन: प्राप्ति गर्न ईमेल डिजाईन गर्ने
यो सबै पुन: प्रयोज्य कोडको बारेमा हो? एर ... सामग्री
जुलाई,, २०१ at 16::2009। बिहान
यो कसरी परम्परागत मिडिया नयाँ प्रविधि अपनाउन र सान्दर्भिक रहन सक्छन् भन्ने एक राम्रो व्यावहारिक उदाहरण हो। यसले मलाई आश्चर्यमा पार्छ कि मोबाइल र अन्य नयाँ मिडिया प्रविधिहरूको प्रयोगले अन्य परम्परागत मिडिया रणनीतिहरूले नयाँ जीवन पाउन सक्दछन्।
यो लेख्न को लागी धन्यवाद!
जुन 14, 2012 मा 5: 32 PM
शानदार लेख, यो धेरै व्यापक र रमाईलो छ! यो त्यस्तै हो
मलाई सहयोगी, र तपाईंको वेबलग धेरै राम्रो छ। म पक्कै साझा गर्न जाँदैछु
यो साथी मेरा साथीहरुका साथ। भर्खर यस साइटलाई बुकमार्क गरियो। आउटडोर विज्ञापन